फैशन स्टाइल पाठहरू
सँधै राम्रो लागी राम्रो छैन किनकि तपाईं स्टाइलिश लुगा छनौट गर्न र हरेक दिन लुगा लगाउन सक्नुहुनेछ, यस समाधान धेरै उबाऊ छ र एक वास्तविक fashionista को लागि स्वीकार्य छैन भनेर बाहेक। यही कारणले, तपाइँ प्रत्येक दिनको लागि स्टाइलिश छविहरू छनौट गर्न आवश्यक छ। सिद्धान्तमा, यसले यो प्रयास र समयको धेरै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ, तर सम्पूर्ण रहस्य स्टाइलिश छविहरूको सही विकल्पमा छ।
क्लासिक्सहरू सधैं आकर्षित हुन्छन्
प्रत्येक दिनका लागि तस्बिरहरू केटीको मूड जस्तै फरक हुनुपर्छ। सबैको कारण आज हृदयले सख्त सूट गर्न सक्छ, र भोलि एक खेलकुद। कुनै पनि केटी जो कुनै पनि केटी मा हुनु पर्दछ एक क्लासिक व्यवसाय हो। यसमा एक पेंसिल स्कर्ट, हेयर क्यान्ड या एक पेज , साथ साथै एक शानदार ब्लूज र जैकेट समावेश छ। यस शैलीको सम्पूर्ण सौन्दर्य यो हो कि त्यहाँ सधैँ एक बहाना यो राख्नु - यो एक नौकरी, एक व्यापार बैठक, सख्त उत्सव, वा एक व्यावसायिक लंच पनि हुन सक्छ। त्यहाँ व्यावसायिक शैलीको एक पनि सचेत संस्करण हो। यहाँ उपयुक्त तेंदुआ प्रिन्टहरू, चौंकानेदार कपालहरूसँग उज्ज्वल जूताहरू, वा टखने सेतोहरू छन्। यो तस्बिर अधिक साँझ संस्करण, कर्पोरेट वा पार्टीको लागि उपयुक्त छ।
कसैले रोमांस रद्द गर्यो
एक विशेष भूमिका रोमान्टिक शैलीमा दिइएको छ। हरेक दिन सुन्दर कसरी लाग्न जान्न को लागी, तपाईलाई सरल नियम पछ्याउन र स्त्री बनाइनु पर्छ। र स्त्रीनिष्ठाको सम्बन्धमा, कुनै निर्दोषता र आकर्षणको रोमान्टिक शैलीको रूपमा आकर्षणलाई अझ धेरै राम्रोसँग जोड दिन्छ। यहाँ, बुद्धिमानी पेस्टेल रंगहरू, लाइट लुगा लुगाहरू, स्टाइलिश सामानहरू, जस्तै उत्कृष्ट लङ्गमा कंधामाथि चकलेट र हैंडबैगहरू स्वीकार्य छन्। प्रत्येक दिन नयाँ तस्विर खिच्न सक्षम बनाउन, यो धेरै आधारभूत छवियों सिर्जना गर्न लायक छ र कुशलतापूर्वक तिनीहरूलाई एकपछि अर्कोमा बदल्दछ, जुन कुन कुराले सधैं सुन्दर, सुन्दर र सुन्दर रहन मद्दत गर्नेछ।
के पहेंलो जूताहरू लगाउने?
साथीको विवाहको लागि के गर्नुहोला?
नयाँ सालको लुगाहरू
कपडामा खरानीको संयोजन
एक सूट कसरी गर्ने?
हेडगियर आर्ट नोवो
महिलाहरु को लागि जापानी कपडे
ठूलो कलर-कोकसँग जैकेट - कसरी लगाउने?
स्टूडियो मा नयाँ वर्ष फोटो सत्र
कपडाहरूमा सुरुङ शैली
यो किन भोको बिरामी छ?
तपेदिक को रोकथाम
कद्दू - शरीरको लागि राम्रो र खराब र वजन गुमाउँछ
रातो कारागारको कम्पोटेन्ट - जाडोको लागि साधारण व्यञ्जनहरू र न केवल!
यतीमा फोटो खिच्न
गाजर र चिकन संग सलाद
वृश्चिकको लागि स्टोन-मोस्टोट
चाय लियोनी र डेभीड डुचोभनी
बैठक कोठामा प्रकाश
उलाना सर्गेनेस्को - संग्रह 2013
बआउटहरू कसरी कम गर्ने
कपालको लागि ब्रेअरको खमीर